Ciidamada Ahlu Sunna ee Dhuusamareeb oo bilaabay inay is dhiibaan - Jowhar Somali news Leader
Home News Ciidamada Ahlu Sunna ee Dhuusamareeb oo bilaabay inay is dhiibaan
Ciidamada Ahlu Sunna ee Dhuusamareeb oo bilaabay inay is dhiibaan
Wararkii ugu dambeeyay ee ka imanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in ciidamada Ahlu Sunna ee la dagaalamay ciidamada dowlada inay oggolaadeen inay is dhiibaan kadib markii la hareereeyay xarunta ay ku sugan yihiin.
Wararka ayaa sheegaya in waanwaan lala galay intabadan ciidamada ay oggolaadeen inay isdhiibaan. Warar la isla dhex marayo oo aan la xaqiijin ayaa sheegaya in waanwaanta ay qeyb ka tahay lacag gaareysa toban ilaa labaatan kun oo dollar oo loo balanqaaday mid walba oo ka mid ah ciidamada Ahlu sunna in la siinayo haddii uu is dhiibo.
Qaar ka mid ah dadka jooga magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay inay arkeen ciidamo ka tirsan Ahlu Sunna oo laga soo saarayo xerada ay ku jireen halkaas oo ay sidoo kale hoggaamiyaasha Ahlu Sunna ku jiraan.
Wararka qaar ee ka imanaya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in hoggaamiyaasha Ahlu Sunna oo uu ku jiro Sheekh Maxamed Shaakir iyo Macalin Maxamuud ay diideen inay isu dhiibaan ciidamada dowlada balse ay oggolaadeen in ciidamada AMISOM ee dalka Jabuuti lagu wareejiyo.
Tiro ku dhow labaatan ruux oo ah dhinacyadii ku dagaalamay maanta ayaa ku dhintey halka qaar kalana ay ku dhaawacmeen.